I-COD Cold War Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
COD Impi Yomshoshaphansi HACKS
Busa njengoba ubungenza kunoma yisiphi esinye isihloko seCall of Duty usebenzisa ama-hacks ethu amangalisayo we-COD Black Ops Cold War! Ngamathuluzi we-Gamepron nakanjani uzophumelela, ngaphandle kwekhono lakho.
Usuvele uthenge iCOD Black Ops: Hack War Cold? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge i-COD Black Ops yethu: ama-Cold War hacks, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kuvuselelwa noma lisatholakala ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu I-COD Black Ops: Impi Yomshoshaphansi Hacks
COD Black Ops: Cold War Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks nokuningi
Thenga I-COD Black Ops: Impi Yomshoshaphansi Ama-Hacks angenile 4 izinyathelo
Khetha i-COD Black Ops: Impi Yomshoshaphansi ohlwini olubanzi lwemidlalo lapha eGamepron lapha
Khetha zonke izici zokugqekeza obukade uzifuna! Sinakho konke okudingayo
Yenza inkokhelo yakho usebenzisa iprosesa yethu yokukhokha ephephile engu-100%, ukuqinisekisa ukuphepha kwamakhasimende
Finyelela kukhiye wakho bese ulanda i-chea
Ngemuva kokuthenga ukhiye womkhiqizo ungafinyelela futhi ulande ama-hacks wethu we-Cold War!
Kungani Usebenzisa i-Gamepron COD Black Ops: Ama-Cold War Hacks?
Ukukhishwa kwakamuva kweBlack Ops Cold War bekuyisizini yesihlanu, engeze kuKitsune, opharetha omusha ovela eJapan. Ngokuhambisana naye, sibonile ukungezwa kwezinye izikhali zesikhathi seMpi Yomshoshaphansi, kufaka phakathi i-TEC-9 SMG kanye nesibhamu se-EM2.
Isibuyekezo se-Black Ops Cold War sika-4 sokulayisha kabusha silapha, futhi sengeze emephini entsha yeZombies kanye nemephu entsha yabadlali abaningi, iRush. Ukube ubukhona ngesikhathi sezinsuku zeBlack Ops II, kungenzeka ukuthi uyayikhumbula iRush nokuthi abadlali bayithande kangakanani. Ukuqala izinto nge-bang, kukhona uhlu lwadlalwayo lwe-paintball olukhethekile olusethwe ku-Rush, futhi.
Isikhathi sesine seBlack Ops Cold War sesifikile futhi sinamamephu amasha ambalwa afaka i-classic Ebiwe ku-Black Ops 2. Kanye nokwengezwa kwalawa mabalazwe amasha, isizini entsha ibuye ibe nezikhali ezintsha, kufaka phakathi isibhamu sokuhlasela i-C58 neMG. I-82 LMG etholakala ngokudlula kwempi.
ICall of Duty Black Ops Cold War isanda kubona ukukhishwa kweSizini 3 Reloaded, engeza ezinye izindlela zezikhali nezombies. Ngaso, sibone ukukhishwa komcimbi wama-80s Action Heroes, owangeze uRambo noJohn McClane kulo mdlalo njengezikhumba zomqhubi ezinqwabeni zabo.
I-Gamepron ibhekwe njengomhlinzeki oholayo uma kukhulunywa nge-Call of Duty hacks iminyaka, futhi lokho okuhlangenwe nakho kukodwa kusivumele ukuthi sihlakulele ukugenca okuphumelela kakhulu kweMpi Yomshoshaphansi. Yize lo kungumdlalo omusha sha, ungalindela ukuthola amandla wokumisa afanayo atholakala kunoma yiliphi elinye ithuluzi leGamepron - ngakho konke ukukhishwa ungqimba lobunzima oluphonswayo luxutshwe, kepha iCall of Duty Black Ops Cold War hacks yethu kuzohlala kukulungele njalo. Uma ungumdlali oqhudelana ngokuncintisana futhi ulahlekelwe nje awukho esilulumagama sakho, ukusebenzisa ama-Cold War cheats wethu kuzoqinisekisa impumelelo yakho kuzo zonke izindlela zemidlalo. Noma ngabe uzama ukudlala iWarzone noma i-Multiplayer, ukusebenzisa i-Gamepron nokukhohlisa kwethu kwe-COD Black Ops Cold War kuzokugcina uphambi kwabancintisana nabo.
Noma ngabe ukwindawo yokwamukela izithukuthuku futhi kufanele ukhuphule izinto phezulu, noma uzama ukulwa nendlela yakho yokuphuma esimweni esingenakwenzeka, ukusebenzisa ukukopela kwethu kweBlack Ops Cold War kuzophusha impilo kumdlalo wakho . Awudingi ukuzungeza imephu futhi uthandaze ungalwi, ungayilwa ngqo nezitha zakho lapho usebenzisa amathuluzi avela ku-Gamepron!
Iqembu lochwepheshe yilona elenza iGamepron, ngokungafani nenye nje yamathuluzi okwenza amathuluzi endlini engaphansi yabazali bayo. Yonke imikhiqizo yethu yenziwe “ngabaculi bokugenca” ngomqondo ongokomfanekiso, okusho ukuthi uzohlala uthola imali yakho. Ukuchitha imali kumathuluzi angafanelekile ngeke nje kukugcwalise ngokuzisola, kodwa kuzokhipha ne-akhawunti yakho yasebhange. Uzoqhubeka uzama ngokulandelana uze ekugcineni ubone ukuthi besilungile! Ukuphela kwendawo enamathuluzi weCold War athembekile yiGamepron, futhi uma usuzizamele ngokwakho, uzobe ucula ingoma efanayo.
Abasebenzisi bethu bangangena ngokungazethembi ngokuzethemba, njengoba konke ukukhishwa okuvela ku-Gamepron kufakwe ukuvikelwa kwe-stellar anti-cheat. Ama-akhawunti akho asezandleni ezinhle nathi, njengoba izinsizakalo eziningi zokuthola ukukopela ezizenzakalelayo ngeke zimake i-akhawunti yakho ngenkathi zisebenzisa ama-COD Black Ops Cold War hacks ethu. Uma une-akhawunti endala noma eyodwa esezingeni eliphezulu, awudingi ukubeka yonke leyo ntuthuko engcupheni ukuze ujabulele ukukopela kwethu. Ama-hacks ethu afaka ukuvikelwa kokulwa nokukhohlisa kwanamuhla, ngakho-ke phefumula kalula! Indlela eya phezulu ilula lapha eGamepron.
IHold War Wall Hack (ESP)
Imininingwane yeCold War Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Cold War Into ESP ngezihlungi
ICold War Aimbot
Isexwayiso sesitha seCold War
I-Cold War super jump mode (akukho monakalo wokuwa lapho ucushwa).
Cold War bone & aim ukhiye okulungisekayo.
ICold War Recoil isinxephezelo
Impela I-COD Black Ops: Impi Yomshoshaphansi Hack Izici
I-COD Black Ops: I-Cold War Player ESP
Bona ukuthi isitha (nabalingani beqembu lakho) bakuphi ngokunika amandla isici se-Player ESP. Amachashazi wesidlali solwazi nolunye ulwazi oluwusizo kusuka kuyo yonke imephu!
I-COD Black Ops: Imininingwane yeCold War Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Funda kabanzi mayelana nezitha nezinto ezikumdlalo ngaphandle kokuzibona ngqo. Nika amandla i-Player Information ESP nezici zokufinyelela njengegama, impilo, nebanga.
I-COD Black Ops: Impi Yomshoshaphansi ESP enezihlungi
Uma udlala iWarzone ungathola impango kalula, noma uvikele i-claymores online! Le nto i-ESP ibuye ibe nokuhlelwa kwesihlungi sokukhomba okulula.
I-COD Black Ops: Impi Yomshoshaphansi i-Aimbot
I-Aimbot ihlale iyinto ebucayi yanoma yikuphi ukugqekezwa kweMpi Yomshoshaphansi, yingakho singadonselanga izibhakela ngalokhu. Hlula izitha kalula usebenzisa Gamepron!
I-COD Black Ops: Ithrekhi Yempi Yomshoshaphansi (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi nendawo)
I-Bullet Track izovumela abasebenzisi ukuthi babone lapho kufika khona isibhamu sabo, kubanike ithuba lokukhomba (futhi baqinisekise) ukubulala ngokuxhamazela. Akunasidingo sokubuza ukuthi uyinqobile yini le mpi.
I-COD Black Ops: Izexwayiso zesitha se-Cold War
Isici Sesixwayiso se-Cold War sizobonisa umyalezo owenziwe ngezifiso esikrinini noma kunini lapho isitha siqonde kuwe noma siseduze.
I-COD Black Ops: Imodi ebandayo ye-Cold War super (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Imodi Ye-Super Jump ilusizo ikakhulukazi ekugengeni kwethu kwe-COD Black Ops Cold War. Gwema ukulimala kokuwa kanye nokwehla okuvela esibhakabhakeni ngalokhu khohlisa!
COD Black Ops: Cold War bone & aim key okulungisekayo
Ama-Aimbot mahle kakhulu njengezilungiselelo ezihambisana nawo, futhi i-Cold War aimbot yakho ikunika ithuba lokulungisa cishe noma yini.
I-COD Black Ops: Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-Cold War aimbot
Amasheke abonakalayo azomisa i-aimbot yethu ekuqondiseni ngokuzenzakalela izitha ezingakwazi ukudutshulwa ngobuchwepheshe, ezizosiza ukuvimbela ukunyakaza okubukeka kusolisa ukuthi kungenzeki.
I-COD Black Ops: Isikhokhi seCold War Recoil
Ukubuyiswa sekuyinkinga esobala uma kukhulunywa ngeCall of Duty, futhi neCold War ayihlukile. Yisuse ngokunika amandla i-Recoil Compensator yethu!
Yiba isidlali esingcono se-Call of Duty namuhla ngokuthola ukufinyelela kuma-Cold War cheats amahle ku-inthanethi. Akukhathalekile ukuthi ufuna ukufeza ini ngokukhohlisa kwethu, sizokwenza kwenzeke - khulisa isilinganiso sakho se-K / D, uwine imidlalo eminingi, futhi ujabule ngokwengeziwe ngokujwayelekile usebenzisa i-Gamepron! Khohlwa ngabo bonke abanye abahlinzeki abanganikeli lutho ngaphandle kwethemba elingamanga futhi basebenze nathi
I-COD Black Ops edumile: Ama-Hacks Wempi Yomshoshaphansi nokuphamba
I-COD Black Ops: Impi Yomshoshaphansi i-ESP neWallhack
Amanye ama-COD Black Ops: Ama-Cold War Hacks nama-Cheats
Abadlali abahle kakhulu be-Call of Duty bavame ukuba nama-HOD amahle kakhulu we-Ops Cold War ohlangothini lwabo, ngoba akukaze kube buhlungu ukuba nethuluzi ongabuyela kulo. Noma ungahleleli ekugenceni “isikhathi esigcwele”, ukuba nekhono lokuthembela ekukhohlisweni kwethu kweMpi Yomshoshaphansi ngesikhathi sokulwa okunzima kusesezingeni eliphezulu. Ukuthi ungumuntu oqalayo noma isigebenga esinolwazi akunandaba, njengoba sikwenzile ukuqinisekisa ukuthi lawa mathuluzi asebenziseka kalula. Silinganise izici ezithandwa kakhulu ezitholakala kuma-Cold War hacks zibe ithuluzi elilodwa elimangalisayo, konke kutholakala ngentengo eyodwa! Akunasidingo sokuqhubeka nokucinga uma ubufuna ubuqili beCold War obuzokunikeza amandla amaningi kunalokho obukade ulindele, njengoba iGamepron ilapha ukuletha.
Ama-HOD amahle kakhulu we-COD Black Ops nama-Cheats azofaka i-Aimbot, i-ESP, i-Footprint, nezinye izici eziningi ezisiza umsebenzisi ukuthi awine kalula.
Ama-Aimbots awasoze anganakwa ngenkathi ucwaninga ama-hacks (noma okungenani, akufanele!). Kube yisisekelo sama-hacks amaningi eminyakeni edlule, imvamisa, ahlobene nemidlalo yokudubula - njengoba ubona, ukuba nokunemba okungenaphutha kuzokusiza ngezindlela eziningi. Noma ngabe kuvikela izitha ukugcina ozakwenu bemboziwe, noma ukudlala indima yodwa yempisi nokubulala ngokuthanda, ukusebenzisa ama-COD Black Ops Cold War cheats wakho kuzokwenza ukuthi ukwenze. Leli ithuluzi labo bobabili abadlali bodwa nabadlali beqembu ngoba ungalungisa izici ukuze zivumelane nezidingo zakho kuze kufike ku-tee.
Asenzanga usayizi owodwa ofanelana nakho konke ukugenca, futhi izinketho zamathambo ezilungiswayo nezinhloso zokhiye zenza lokho kubonakale. Shintsha i-aimbot uyivule futhi uyivale kalula usebenzisa imenyu yethu engaphakathi kwegeyimu, okuyilapho ungaguqula ukuthandwa kwe-FOV Circle yakho.
Ama-hacks e-ESP yilokho kubaduni abaningi abajwayele ukukusebenzisa njengoba bethembekile nje. Noma ngabe uzama ukuzuza ngaphezu kwezitha zakho noma ubheke nje ukuphanga ngejubane, ukusebenzisa i-ESP yethu neWallhack kuzokusebenzela kahle. Ungabona bobabili abadlali nezinto nge-Cold War ESP hack, ngakho-ke ama-claymores namanye amadivayisi aqhumayo ngeke aphinde akumangaze. Abadlali abaningi besaba kakhulu ukunqamula emephini ngenxa yezingozi ezicashe kuzo zonke izingxenye, kodwa manje usungagijima ngokuzethemba! Akukho okungafihlwa esweni lakho elibona konke, futhi lokho kungenxa yeCold War ESP yethu kanye neWallhack.
Hhayi lokho kuphela, kepha ungabona izitha ezivela kuyo yonke imephu! I-ESP imele i-Extra Sensory Perception, futhi ukunika amandla lesi sici kuzokuvumela ukuthi ubone amamodeli wesidlali (namamodeli entwana) ngezindawo eziqinile / ezi-opaque. Manje uyazi ukuthi akukho lutho olumi endleleni yakho endleleni eya empumelelweni!
Sinikeza okungaphezu nje kwezici zendabuko zokugenca lapha ku-Gamepron, futhi isibonelo esifanele kufanele kube inketho yethu ye-Footprint. Ungavumela lesi sici ukuthi sikwazi ukulandelela izitha zakho sisebenzisa imikhondo yaso, engenziwa ibe nenembe ngokwengeziwe ngesici se-Distance. Ibanga lizokwazisa ukuthi ilitshe likude kangakanani, ngakho-ke awusoze ulandelela umuntu futhi ungazi ukuthi ukuphi. Uma othile ebambelela ezindleleni zakho zokulandela umkhondo, bangaholela ekuqamekeleni, kepha lokho akunakwenzeka ngebanga elinikwe amandla. Ukushaya kanzima kunabaphikisi bakho kuzoletha amathuba amaningi okuwina ngokwemvelo, futhi kulapho kulimala khona okuphezulu.
Ukulimala Okuphezulu kuzokwenza konke ukudubula kwakho kubalwe, kubhekiswe kuphela ezindaweni ezibulalayo zomzimba ezitheni zakho. Ukulahlekelwa yimpi nokulwa ukuthola abaphikisi kuyizindlela ezimbili ezinkulu zokuzithola usohlangothini olwehlulwayo, ngakho-ke sebenzisa leli thuluzi ukugwema konke lokho.
Thatha indlela eyingqayizivele yenqubo yakho yokugenca ngokuthola ukufinyelela kuma-COD Black Ops Cold War cheats akho namuhla. Onke amathuluzi wethu azoza nezici ezingeziwe ongeke uzithole kaningi, ezinye zazo zitholakala kuphela eGamepron. I-Radar ingesinye sezici eziwusizo ongasisebenzisa ngenkathi usebenzisa ama-Cold War hacks ngoba ukwazi isikhundla sezitha zakho ngokusobala kuyazuzisa! Ungakwazi ukuyenga
ukubabeka ezingibeni noma bagweme noma yimaphi ama-ambushes abangahle bazibekele wona, futhi balungiselele ukulwa ngokushesha kunabanye. Uthola ukubiza isivinini semidlalo yakho ngokukopela kwethu kweBlack Ops Cold War, futhi lokho kukodwa kwanele ukuqhubeka.
Ukususwa kuyisici esivumela isidlali ukuthi sisuse ezinye zezici ezicasulayo ezihambisana nemidlalo yeCall of Duty. Noma ngabe kuyabuyela emuva, kuyabhema, kuyabhebhetheka, noma ngisho nokuwa komonakalo, ungathembela kuthuluzi lethu ukukusiza uphumelele kunoma yikuphi.
I-COD Black Ops: Ama-Cold War Hacks Imibuzo
Kungani i-COD Black Ops yethu: Ama-Cold War Hacks
I-Gamepron ihlale izinikezele kumsebenzisi kusukela saqala ukwethula, futhi yilokho okwenza ukukopela kwethu kuthembeke. Ukwenza ngcono ulwazi lomsebenzisi lwamakhasimende ethu kuyinto ebaluleke kakhulu, futhi ungabona ukuthi siyalikhathalela ikhwalithi yakho konke ukukhishwa ngokuzisebenzisa ngokwakho. Yiba yilungu lenkonzo yokugenca ethandwa kakhulu etholakala ku-inthanethi namuhla futhi uhlanganyele nathi eGamepron.
Kungani iCOD Black Ops yethu: Cold War Aimbot
Ukunemba akukaze kube yinkinga uma ubhalise ne-Gamepron ngoba i-hack yethu ye-COD Black Ops Cold War inesimo se-aimbot yobuciko. Ungaguqula amasethingi ukuze i-aimbot ifanele izidingo zakho, ngokungafani nokuphoqeleka ukusebenzisa amasethingi wefektri ngaso sonke isikhathi! Lungiselela isivinini, ubushelelezi, nezinkomba i-aimbot yakho ezosebenza kuzo.
Kungani iCOD Black Ops yethu: Cold War ESP
I-ESP isho ukubonwa okungaphezulu kokuqonda, okucishe kufane nokungeza umuzwa owengeziwe! Yize zingahluka ngekhwalithi, i-Gamepron ine-Black Ops ESP enhle kunazo zonke etholakala ku-intanethi. Ungasebenzisa i-Player ESP yethu ukuthola izitha nabalingani beqembu, kanye ne-Item ESP yethu (enezihlungi) ukuthola lapho kutholakala khona izinto eziwusizo neziqhumane eziyingozi.
Kungani iCOD Black Ops yethu: Cold War Wallhack
Ama-Wallhacks ayinto ethile ekhethekile lapha eGamepron, ngakho-ke kulabo kini abafuna ukwazi ukuthi aniphuthelwa yinoma yisiphi isenzo, ukukopela kwethu kwe-COD Black Ops Cold War kukufanele. Ungabona yonke into ngokusebenzisa indawo eqinile ne-opaque, evumela abasebenzisi bethu ukuthi babone ingozi ngezindonga. Hlela kusengaphambili futhi umangaze abaphikisi bakho lapho bengakulindele!
Kungani iCOD Black Ops yethu: Cold War Norecoil
Noma yimuphi umdlalo wokudubula okhishwe emakethe yesimanje uzoba nokululama njengendlela yokwenza ukuqondisa kube nzima. Abanye abantu bangakwazi ukuzivumelanisa nezimo futhi basebenzise izinsuku zabo ukuthola ukuthi iziphi izikhali ezinenani elincane lokubuyisa, kepha abasebenzisi bethu eGamepron bazohlala bahlakaniphile kunalokho! Susa ukubuyisa futhi ugcine inhloso yakho iqinile ne-Recoil Compensator yethu.
Ungalanda kanjani ama-COD Black Ops amahle kakhulu: ama-Cold War hacks?
Ukulanda ukukopela kwethu kwe-COD Black Ops Cold War akukaze kube lula! Lapho usuthengile ukhiye wakho womkhiqizo, ungawusebenzisa ukufinyelela ingosi yethu yokulanda bese uqala ukulanda ukukopela kwethu. Akunasidingo sokukhathazeka ngokufakwa noma, ngoba asikho isidingo sokufaka amathuluzi ethu ngesandla - konke kuzenzakalelayo, okumele ukwenze ukwethula ukugenca.
Kungani iCOD Black Ops yakho: I-Cold War i-hacks ibiza kakhulu kunamanye
Awusoze wasala othulini ngeGamepron, njengoba ukuphepha kwethu kuyinto ephezulu kakhulu. Abanye abahlinzeki babheka kithi ukuthola ugqozi maqondana nalokhu, njengoba singeke sivumele abasebenzisi bethu babhekane nokuvinjelwa! Hhayi lokho kuphela, kepha sinenani elilinganiselwe lama-slots atholakala ekukhohliseni kweMpi Yomshoshaphansi nganoma yisiphi isikhathi. Lezo zinto ezimbili ezihlanganisiwe ziholela entengo ephakeme kancane!
Uma ungafuni ukuthola ukufinyelela esikhathini eside kokukhohlisa kwethu, ungakhathazeki ngakho! Asisoze sabamba ukuthunjwa kwabasebenzisi bethu ngokubaphoqa ukuthi bakhokhele ukufinyelela isikhathi eside kunalokho abebengathanda, njengoba sinikela ngenketho yokhiye womkhiqizo wosuku olungu-1, isonto eli-1, nenyanga eyodwa. Abanye abahlinzeki be-hack bazokuphoqa ukuthi uzibophezele unyaka wonke ngezikhathi ezithile, kepha i-Gamepron ihlala iguquguquka ngaso sonke isikhathi.
Awesome I-COD Black Ops: Impi Yomshoshaphansi Hack Izici